တရုတ် GDPနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်မှု
တရုတ်ရဲ့ သုံးလပတ်ကာလ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် စက်မှုထုတ်ကုန်များတိုးတက်မှုဒေတာကို ၀၅:၀၀ MT မနက်အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် ထိုနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်များ ဒေတာထုတ်ပြန်ချက်များသည် အဓိကငွေကြေးများ၏ ငွေလဲနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတာပဲဖြစ်ပါသည်. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ အများခန့်မှန်းထားတဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းထက် ပိုမိုတိုးတက်လာနေတယ်လို့ သိရပါသည်. ဒါကြောင့်ပဲဈေးကွက်က တရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေကို ယခုတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ဆက်ရှိသွားမလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်.
ဒေတာကောင်းမွန်ပါက AUDနှင့် NZDတို့လို ငွေကြေးတွေတန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပြီး ဒေတာမကောင်းပါက (JPY, CHF)တို့လို စိတ်ချရတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစားတွေကို ၀ယ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်.